JD Sports - Google Play ရှိ အက်ပ်များ
Wear OS အတွက် နာရီဒိုင်ခွက်များ
JD Sports Fashion PLCစျေးဝယ်ခြင်း
Google Translate ကိုအသုံးပြု၍ ဖော်ပြချက်ကို မြန်မာ (မြန်မာ) သို့ ဘာသာပြန်လိုပါသလား။ဖော်ပြချက်ကို အင်္ဂလိပ် (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ဘာသာသို့ ပြန်လည်၍ ပြန်ဆိုရန်
သင်အားကစားဝတ်စုံများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်လမ်းပုံစံများကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေ၊ အသစ်နှင့်သီးသန့်သင်တန်းပေးသူများနှင့်အဝတ်အထည်များနေ့စဉ်ကျဆင်းနေသဖြင့် JD Sports app သည်သင့်ကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ must-cop စနီကာ၊ ဖိနပ်၊ အဝတ်နှင့်အသုံးအဆောင်များဖြင့် JD အက်ပလီကေးရှင်းသည်အကြီးမားဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များကိုသင်၏လက်ချောင်းထိပ်သို့သယ်ဆောင်ပေးသည်။
JD ၏သီးသန့်စတိုင်များအပါအ ၀ င် Nike၊ adidas, Jordan, Converse နှင့်အခြားယောက်ျားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သင်တန်းပေးသူများကို ၀ ယ်ပါ။ Nike ၏ Air Max၊ Air Force 1 နှင့် VaporMax တို့၏ကျော်ကြားမှု၊ Ozweego၊ Gazelle နှင့် Superstar စတိုင်များအပါအ ၀ င်နောက်ဆုံးပေါ် adidas မူရင်းများ၊ Air Jordan, Yeezy နှင့် Vans 'Old Skool စသည့်နည်းပြဆရာများနေ့စဉ်နေ့စဉ်ကျဆင်းနေခြင်းတို့ဖြင့်သင်နောက်ဆုံးထွက်တွင်ပါဝင်နိုင်သည် သင်လိုချင်သည့်အတိုင်းစတိုင်များနှင့်အရောင်အသွေးစုံစုံလင်လင်ရှိသည်။
JD အက်ပလီကေးရှင်းသည်လတ်ဆတ်သောအသစ်များဖြင့်လည်းထုပ်ပိုးထားသည်။ T-shirts, hoodies, joggers, jackets နှင့်အခြားအရာများဖြင့် North Face, BOSS, EA7, Jameson Carter, PUMA, Under Armor နှင့် SikSilk စသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့်လမ်းအသစ်များကိုသင်ရနိုင်သည်။
အားကစားစျေးဝယ်ဖို့ရှာနေတာလား? သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ် adidas Ultraboost ၌ run နေ, Nike ၌လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်ဒီရာသီရဲ့ဘောလုံးဖိနပ်, ပစ္စည်းများနှင့်ပုံတူရှပ်အင်္ကျီထဲမှာအစေးမှယူပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့အဆင့်ကိုသင်၏စွမ်းဆောင်ရည်တက်ယူရန် Locker အတွက်အားလုံးအခြေခံလိုအပ်ချက်များရရှိပါသည်။
JDX Unlimited Membership ၀ န်ဆောင်မှုဖြင့်သင်ဆန္ဒရှိသလောက်လည်ပတ်မှုကိုပြန်လည်လန်းဆန်းစေပါ။ ပေါင် ၉.၉၉ ဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအကန့်အသတ်မဲ့ရှိသောဗြိတိန်နိုင်ငံနောက်တစ်နေ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အနက်ရောင်သောကြာနေ့၊ ခရစ်စမတ်နှင့်နွေရာသီအရောင်းအ ၀ ယ်များအပြင်အခြားသီးသန့်အခွင့်အရေးများကိုရယူပါ။
ရောင်းအား၊ ပေးပို့ခြင်းကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အခြားအရာများကို ဦး စွာသိထားပါ။ ထိုအသိပေးချက်များကိုဖွင့ ်၍ သင်လိုအပ်သည့်အခါသင့်ကိုယ်ပိုင်စျေးဝယ်ခြင်းဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုသင့်ထံသို့တိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ။
နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ကဒ်နှင့် eGIFT ကဒ်!
သင်၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို JD လက်ဆောင်ကဒ်ကိုစာတိုက်၊ အီးမေးလ်သို့မဟုတ်စာဖြင့်ပို့ပါ။ သင်ချက်ချင်းပေးပို့ခြင်းကိုရွေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်ပို့ဆောင်လိုသည့်နေ့ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သငျသညျနောက်ဆုံးမိနစ်ကထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံသော!
စျေးဝယ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုအသစ်များထက်ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ Google Pay, PayPal, Klarna, Clearpay နှင့်အခြားများစွာတို့ဖြင့်သင်နှင့်သင့်လျော်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ လာမည့်လတွင်ငွေပေးချေမှုမှအမြန်ထွက်စစ်ဆေးခြင်းသို့သင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၇ နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ကလစ်နှိပ်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးပေါ်သင်တန်းဆရာများ၊ ဖိနပ်များ၊ အဝတ်အထည်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုသင့်ကိုကိုက်ညီစေရန်သင်ရရှိနိုင်သည်။
trending ရဲ့အဘယ်အရာကိုထွက်လက်လွတ်မနေပါနဲ့! သင်ရှာဖွေနေသောအရာကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့် Live Search သည်ယခုခေတ်တွင်ခေတ်စားနေသောဆက်နွယ်သည့်ရှာဖွေရေးမေးမြန်းချက်များစာရင်းကိုအလိုအလျောက်ကျလိမ့်မည်။
လျင်မြန်စွာထိပ်တန်းရှာဖွေမှုများကိုသန့်စင်ပြီးသင်၏စတိုင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ အရွယ်အစား၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ အရောင်၊ စုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်စျေးနှုန်းအရသင်မြင်တွေ့လိုသည်များကိုအတိအကျရှာဖွေပါ။
သင်၏နောက်ရဲနှင့်နီးကပ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရထပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 360-trainer အမြင်သင်ထောင့်တိုင်းကနေသင်တန်းဆရာကိုကြည့်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ HD Sneaker များသည် HD ထုတ်ကုန်ဗွီဒီယိုများနှင့်တည့်တည့်မှကြည့်နေသည့်ပုံစံကိုကြည့်ပါ။
သင့်ဂီယာကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏စတိုင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။ သင်၏အသွင်အပြင်အသစ်ကိုထုံးစံအတိုင်းထုပ်သို့မဟုတ်အိတ်ဖြင့်အဆုံးသတ်ရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ဘောလုံးရှပ်အင်္ကျီသို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်တွင်နာမည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်စေ၊ JD အက်ပလီကေးရှင်းတွင်၎င်းတို့ကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေပါ။
Nike သို့မဟုတ် adidas မှနောက်ဆုံးပေါ်သင်တန်းဆရာများလိုအပ်ပါသလား။ ပစ္စည်းများကိုသင့်ဆန္ဒအလျောက်သိမ်းဆည်းထားသည့်စာရင်းတွင်သိမ်းဆည်းရုံသာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ခရစ်စမတ်သို့မဟုတ်သင်၏မွေးနေ့အတွက်လက်ဆောင်အရိပ်အမြွက်တစ်ခုလွှင့်ရန်သင်၏ဆန္ဒစာရင်းကိုမျှဝေပါ။
သင်၏ဒေသခံ JD ကိုရှာပါ
အရာရာကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးရှာဖွေစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုပြင်ခဲ့သည် သင်၏အနီးဆုံးစတိုးဆိုင်ကိုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောမြေပုံများဖြင့်ရှာဖွေပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ A-Z စာရင်းကို scroll လုပ်ပါ။
စျေးဝယ်မှုကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်ပြီးငွေရှင်းကောင်မှဖြတ်သန်းပျံသန်းပါ လိပ်စာများကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းပါ၊ သင့်မှာကြားမှုကိုစစ်ဆေးပါ၊ ယခင်ဆိုင်များကိုကြည့်ရှုပါ။
၂၀၂၁၊ ၇ ဇူလိုင်
5.1 နှင့် အထက်
ဖိနပ်, အဝတ်ကို, ဖက်ရှင်အိတ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏အကြီးမားဆုံးရှေးခယျြမှု
850 + ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ app ပေါ်တွင်သင်၏နေ့စဉ်ဖက်ရှင်ပြင်ဆင်ချက်အရ, အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း & အသစ်စျေးဝယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်ပေါက်, Retro & ပေါင်းစျေးဝယ် & စူးစမ်းရန်သင့်အဆုံးစွန်ဦးတည်ရာ
JD Sports Fashion PLC မှနောက်ထပ်
ဖိနပ်များ၊ လမ်းအ ၀ တ်အစားများ၊ သီးသန့်ဆုများရယူပါ
အသစ် JD အမျိုးသမီးများက Android app ကိုဤနေရာတွင်နှင့်စျေးဝယ်ဖို့အဆင်သင့်ပါ!